Kutheni ukuBekwa kwegama eliphambili kungasokuze kube yiNtsebenzo yakho ePrayimari Martech Zone
Kungekude kudala, amacebo e-SEO ubukhulu becala aqulathe ukubekwa kwinqanaba kumagama aphambili. Amagama aphambili yayiyinto ephambili yokulinganisa ukusebenza kwephulo. Abakhi bewebhusayithi banokufaka iisayithi ngamagama aphambili, kwaye abathengi bangathanda ukubona iziphumo. Iziphumo, nangona kunjalo, zibonise umfanekiso owahlukileyo.
Ukuba isifundo sakho se-SEO sabaqalayo sibandakanya ukusebenzisa izixhobo zikaGoogle ukufumana amagama aphambili emva koko uzibeke kwiwebhusayithi yonke, inokuba iya kwicala elifanelekileyo, kodwa ukuya kuthi ga kwinqanaba. Kwimeko yangoku ye-SEO, amagama aphambili yenye yeendlela zokukhokelela kwinqanaba lewebhusayithi yakho.
Ekuqaleni, kumzamo we-SEO ibhlog yam, ndenza okufanayo, ukugxila igama elingundoqo. Kwaye yayingekuphela kwempazamo endiyenzileyo eyakhokelela kwi Iphulo le-SEO ukungabi naxabiso. Ngoku ndenze uphando ngokwaneleyo ndinolwazi olwaneleyo lokwabelana nengqondo yam kunye nani nonke ukuze nihoye onke amanqaku abalulekileyo ngaphambi kokuba niqhubeke ne-SEO yenu.
Ngaphambi kokuqhubela phambili kumagama aphambili, masiqhubekeke singene, kwindlela yokukhangela kuGoogle esebenza ngayo. Ngokungafaniyo nakwixesha elidlulileyo xa amazinga aphezulu kwi-SERPS Inokuba kukusetyenziswa kwegama elingundoqo okanye amabinzana aphambili, ngoku, uGoogle akabeki magama aphambili. UGoogle endaweni yoko ubeka iziphumo ngokweempendulo, okt, loluphi ulwazi umsebenzisi awayezimisele ukulukhupha. Ukubaluleka kwamagama aphambili kuphando sele kuqalile ukwehla kuba amagama aphambili agxininisa kuphela kumagama afakwa ngabasebenzisi, hayi le bayenzayo wayefuna.
UGoogle uzama ukufumana iimpendulo ozifunayo. Oko kuthetha ukuba iphepha lisenokuhlala inqanaba eliphezulu ngaphandle kwexesha lokukhangela lingabikho kwaphela kwinkcazo yeMeta okanye kwiphepha. Apha ngezantsi kukho umzekelo.
Uyabona ukuba iziphumo eziphezulu azinaso na nesiqingatha samagama kwibinzana eliphambili. Kwangokunjalo, kwiphepha lewebhu lesiphumo esiphambili, igama "imvula ” ayikho. Oku kuchaza indlela i ukubaluleka Iziphumo zibaluleke ngakumbi kuGoogle kunamagama aphambili.
Oku kusizisa kwinqanaba lokuba amagama abalulekileyo asemgangathweni awathethi nto kwizicwangciso zanamhlanje ze-SEO. Uluhlu lwamagama aphambili yinxalenye enye yenkqubo yokuguqula. Nantsi indlela UGoogle uyicacisa kwibhlog yabo:
Ke ngoko, ngaphambi kokuba ungene kwisitshixo segama lakho elingumlinganiso kwiwebhusayithi yakho kufanele ukuba ibe nesalathiso kunye nokukhasa. Nokuba emva kokuba indawo yakho ibekwe endaweni, kufuneka yanelise iinjongo zabasebenzisi ngasemva kokhangelo kwaye bafeze iinjongo zeshishini lakho. (Umz. Ukhuphelo, imirhumo ye-imeyile, njl.
Ingasathethwa ke ingeniso kunye nenzuzo; amagama abalulekileyo anamandla awathethi ukuba uya kuba nawo Umthamo omkhulu wezithuthi eziphilayo, Ukugcina ukujonga izizathu ezichazwe ngaphambili kunye nasemva kwebhlog, kunzima ukutsho ukuba lingakanani igama eligcweleyo elizokutsala kwiwebhusayithi yakho. Nokuba umvavanyi wenqanaba ubonakalisa isiphumo esihle, kuya kufuneka uyazi ukuba idatha yamagama aphambili ojonge kuyo ayichanekanga ngokuchanekileyo. Ukuchaza isizathu soku, ndinokuthatha igama elinye ukuphendula, zobuqu.
Makhe ndikucacisele ngendlela ubuqu obuchaphazele ngayo iziphumo zophando kunye neziphumo zokukhangela indlela yokufumana ukubaluleka kwamagama aphambili kwizikhundla kwiziphumo zokukhangela.
UGoogle unolwazi lwethu oluninzi, kubandakanya nembali yethu yokukhangela, indawo esikuyo, ubalo lwabantu, isixhobo esisisebenzisayo okanye esisisebenzisa ikakhulu, indlela yethu yokukhangela iincwadi, iindawo esikuzo ubukhulu becala kunye neminye imisebenzi kwamanye amaqonga anje. njenge-Youtube.
Umzekelo, ukuba bendikhangela Iziko lokomelela eNew Jersey, Iziphumo eziphezulu kuGoogle wam zibonisa iwebhusayithi yendawo yokuzivocavoca esele ndiyindwendwele ngaphambili.
Kwangokunjalo, ukuba ndikhangela iivenkile zokutyela eNewark City ngentsimbi ye-11 kusasa, uGoogle uya kuyibona njengomntu osemotweni efumana indawo yokutyela ukuba atye isidlo sasemini.
Ke ngoko, ukucoca iziphumo, uGoogle uya kubonisa iindawo zokutyela ezivulekileyo, ezisebenza isidlo sasemini, kwaye zikwindawo yokuqhuba yendawo endikuyo njengezona ziphumo ziphambili.
Le yimizekelo nje emibini; Kukho ezinye izinto ezininzi ezixelela indlela uGoogle angalisebenzisi ngayo igama eliyintloko, ukubeka iziphumo.
Ukukhangela kwiselfowuni kutsala iziphumo ezahlukeneyo xa kuthelekiswa naxa ukhangela kwidesktop. Ngokufanayo, Ilizwi likaGoogle idonsa iziphumo ezahlukileyo xa kuthelekiswa neziphumo zikaGoogle ngoku. Iziphumo eziphezulu ziyatshintsha ukuba usebenzisa isikhangeli kwimowudi ye-incognito.
Kwangokunjalo, igama elifanayo lokukhangela elingene kumantla eCalifornia linokuzoba iziphumo ezahlukeneyo xa kuthelekiswa nokuba lingeniswe kumazantsi eCalifornia.
Ngenxa yokuba, nokuba mna nawe besime ecaleni komnye nomnye, iziphumo zethu zophando ziya kuhlala zahlukile. Kungenxa yesizathu esichazwe apha ngasentla, okt.
Njengoko ndenze ekuqaleni, unokujonga ukusebenza kwephulo lakho ngokukhangela amagama aphambili kwaye ubone ukuba isikhundla kwiphepha lokuqala.
Emva koko ubuya kubuyela kwiingxelo ukuze ubone ukuba yeyiphi inqanaba eliphakathi kumagama aphambili ekujoliswe kuwo.
Sibonile apha ngasentla ukuba amagama aphambili ayingombala ofanelekileyo ukugweba impumelelo yeshishini lakho kwi-intanethi. Ke singenza ntoni ukwenza isicwangciso sethu se-SEO sibonakale?
Imigangatho yokuBaluleka ePhakamileyo
Ukusetyenziswa kwesicwangciso se-SEO sanamhlanje amagama angumsila omde. Ngoba? Benza iphepha lakho libonakale liluncedo ngakumbi kwinjini yokukhangela kungoko ikwindawo ephezulu kubantu abafanelekileyo kwiindawo ezilungileyo.
Isikhundla segama lakho eliphambili kwiwebhusayithi alinamsebenzi, kuba zininzi iindlela abantu abakhangela ngazo. Kwakhona, uGoogle ubonakalisa iziphumo nganye nganye ngokusekwe kwimbali, indawo, isixhobo, njl.
Kuya kufuneka ukuba uqiniseke ukuba inani leendwendwe ezifika kwiphepha lakho ngokukhangelwa kwezinto eziphilayo ziyakhula yonke imihla, inyanga nenyanga nonyaka. Kuya kufuneka ukhathalele ukuba iindwendwe kunye neendwendwe ezintsha zivela ngaphakathi kwintengiso yakho ekujolise kuyo.
Kuya kufuneka ulindele uguquko ngakumbi kubakhenkethi abafika ngophando lwendalo.
Gcina ukhumbula ukuba amava akho ophando awabonisi iziphumo zophando zabathengi bakho. Kungenxa yeso sizathu ayisiso isalathiso sempumelelo yephulo lakho le-SEO kwaye ayitsho ukuba iwebhusayithi yakho izakufumana uguquko ngakumbi.
Gxila kwiziphumo, injongo yakho kukukhala kwefowuni yakho, ukufumana iimeyile zigcwele iifom zonxibelelwano, okanye i-odolo yeetheyibhile zakho ukubonisa iiodolo ezintsha.
Emva koko nguwe kuphela onokuthi ubhengeze iphulo lakho njengempumelelo. Ukufika apho akukho lula. Ungathandabuzi ukubuza uncedo lweengcali ukwakha iphulo lakho kunye nokunyusa umdlalo wakho we-SEO.
tags: Isikhundla segama elingundoqoUluhlu lwamagama aphambiliamagama angumsila omdeukukhula kwezinto eziphilayoI-serp yokukhangela yendaloukubalulekaSEO
Zeziphi ezi-5 zeentlobo eziqhelekileyo zeCalls-to-Action?